News | Tag: War
'के अमेरिकाले युद्धका लागि लल्कारेकै हो त ?'
एजेन्सी । अमेरिकी सेनाको हवाई आक्रमणमा परी इराकी र इरानी दुई जना बरिष्ठ कमाण्डर मारिएपछि इराकका काम चलाउ प्रधानकमन्त्री अदेल अब्देलले अमेरिकालाई ‘विनाशकारी युद्धको सुरुवात गरेको’ आरोप लगाएका छन् ।
अफगानिस्तानमा होला त युद्धविराम ?
एजेन्सी । युरोपेली संघ (इयु) का अधिकारीहरूले अफगानिस्तानमा युद्धविरामको लागि आह्वान गरेका छन् । अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क एस्परले अप्रत्याशित रुपमा काबुलको भ्रमण गरेलगत्तै इयुले युद्धविरामको आह्वान गरेको हो ।
‘वार’को सिक्वेल बन्ला त ?
बलिउड अभिनेता टाइगर श्रफ र ऋतिक रोशनको एक्शन फिल्म ‘वार’ २ अक्टोवरबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आइसकेको छ । क्रिटिक्स र पब्लिकबाट फिल्मले राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको छ । यसरी फिल्मले राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको समयमा दोस्रो पार्ट बन्छ कि बन्दैन भन्ने प्रश्नहरु पनि सुन्नमा आइरहेको छ । के साँच्चै निर्माताले ‘वार’को दोस्रो पार्ट बलाउँला त ?
अहिलेसम्म ‘वार’को कमाई कति ?
एजेन्सी । गान्धी जयन्ती अर्थात अक्टुबर २ बाट प्रदर्शनमा आएको दुई सुपरस्टार ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफ अभिनित फिल्म ‘वार’लेृ बक्स अफिसमा आक्रामक कमाई गर्दै विभिन्न रेकर्ड समेत तोडेको छ ।
‘वार’को बम्पर ओपनिङबाट धेरै खुसी छन् ऋतिक र टाइगर !
काठमाडौं । हिन्दी फिल्म ‘वार’ २०१९ कै सबै भन्दा ठूलो फिल्म साबित भएको छ । एक्शन अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफ र वाणी कपुर अभिनित यो फिल्मले पहिलो दिन ५३.३५ करोडको बक्स अफिस कलेक्शन गर्दै नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । फिल्मले दुई दिनमै ७७.७० करोडको कमाई गरिसकेको छ ।
बक्स–अफिस कलेक्शन : ‘ओपनिङ–डे’ मा ‘वार’ले ५० करोड कमायो !
बलिउडका दुई एक्शन अभिनेता ऋतिक रोशन र टाइगर श्रफको फिल्म ‘वार’ दर्शकमाझ रिलिजमा आइसकेको छ । दुई अक्टोवरबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आएको ‘वार’ले ओपनिङ–डे मा जबरदस्त कमाई गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । बक्स अफिस इन्डियाको वेबसाइट अनुसार टाइगर र ऋतिकको ‘वार’ले पहिलो दिन ५० करोडको कमाई गर्दै नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो ।
‘वार’मा २.३० मिनेट लामो टाइगरको इन्ट्री सिन !
बलिउड अभिनेता टाइगर श्रफको आगामी फिल्म ‘वार’ निकै चर्चामा छ । यो फिल्ममा अर्का अभिनेता ऋतिक रोशनसँग टाइगरले फाइट गर्दै गरेको देख्न पाइने भएको छ । यी दुवै अभिनेता एक्शन हिरोको रुपमा चिनिन्छन् । यो फिल्मको इन्ट्री सिनको लागि अभिनेता टाइगरले ठूलो लेबल तयार गरेका छन् ।
एक्सनै एक्सनले भरिएको फिल्म ‘वार’ को टिजर सार्वजनिक
एजेन्सी । बलिउडका दुई एक्सन स्टार अभिनित फिल्म ‘वार’ को अफिसियल टिजर सार्वजनिक भएको छ । आगामी २ अक्टोबरमा रिलिज हुने फिल्मको टिजरमा ऋतिक र टाइगरबीच भिषण युद्ध देखाइएको छ ।
इरान र अमेरिका युद्धको संघारमाः यस्ता छन् युद्धका प्रमुख कारणहरु
इरानको तेल आयातलाई ध्वस्त पार्न र आर्थिक रुपमा लाचार बनाउन अमेरिका लागि परेको छ । गएको नोभेम्बरमा अमेरिकाले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।